Ukukhuphela iVimeo yasimahla-Gcina iividiyo zeVimeo ngokuchofoza nje ezimbalwa
Usebenzisa uhlobo oludala. Cofa apha ukufaka inguqulelo yamva nje 4.2.2
Simahla Akukho mlinganiselo Vimeo Downloader
❝Gcina iividiyo zeVimeo ngonqakrazo olumbalwa❞
➶ Le ndawo ikuvumela ukuba ukhuphele nayiphi na ividiyo yeVimeo ngokungena kwi-URL yevidiyo.
Khuphela i-URL yevidiyo kwaye uyincamathisele kwibhokisi engasentla, emva koko umkhupheli weVimeo uya kuyifumana ngokukhawuleza loo vidiyo. Cofa ekunene kwikhonkco lokukhuphela kwaye ugcine iividiyo zeVimeo kwidiski yendawo.
Isilayidi seVimeo elula
Olu lwandiso lukuvumela ukuba ukhuphele ividiyo kwiVimeo ngokufaka amaqhosha okhuphelo ngokuthe ngqo kumdlali weVimeo. ➥ Faka ngoku
Siza kukukhuphela ividiyo yabucala kwiVimeo kwaye urekhode ividiyo yokusasaza bukhoma. Inkxaso kwiiwebhusayithi ezininzi. ➥ Faka ngoku
➥ Faka ngoku
IziBonelelo zesiXhobo seVimeo yokukhuphela iVidiyo
Khuphela inani elingenamkhawulo leevidiyo zeVimeo kuLuhlu lwadlalwayo, iziteshi, ukuthandwa, Jonga kamva, ukuqokelelwa.
☀ Isixhobo sethu sokukhuphela imiboniso bhanyabhanya yeVimeo inokwenza ividiyo ithathwe, ngokukuvumela ukuba uyidlulisele kwizixhobo ezininzi ngaphandle kwesidingo sokufikelela kwi-intanethi.
☀ Isusa iiyure ezingapheliyo zokulanda kunye nokulayisha! Ungayikhuphela ividiyo kwaye ubukele imovie ngaphandle kokuphazamiseka (uvunyelwe ukuba uyicime kwaye ufumane izithonga).
☀ Unokuphinda ubeke kwakhona iividiyo, iimuvi kunye nemidlalo yeTV kaninzi njengoko ufuna.
☀ Amaxesha amaninzi iziqendu ezivela kwimiboniso yeTV ziyacinywa kwiseva. Ukuba ukhuphela iziqendu ngaphambi kokuba zisuswe kwiserver, iba yinxalenye yengqokelela yakho.
I-Vimeo yeyona ndawo ifanelekileyo simahla ukubukela, ukwabelana kunye nokulayisha iividiyo ze-HD. Ungafumana izinto ezinomdla kuwe ngokukhangela kumanqanaba kunye namajelo. Emva kokuba ufumene iVimeo Plus okanye iakhawunti ye-Pro, ungonwabela inkonzo engcono kunye nezibonelelo ezingaphezulu.
Ukukhuphela ividiyo yeVimeo
Khuphela iividiyo ngokukhawuleza ngamanyathelo alula kwaye alula ngaphandle kobhaliso okanye uvula iakhawunti kumkhuphe ividiyo yevidiyo kwaye ugcine iividiyo ukuze ubuke kamva okanye ezinye iinjongo.
Khuphela ividiyo ephezulu yeVimeo
Emva kokuba ukhuphele iividiyo kwiVimeo ekwi-Intanethi, zidlale ukuze ujonge umgangatho wevidiyo. Unokuphumla uqinisekisa ukuba iividiyo ezikhutshelweyo zikwinqanaba elifanayo kunye nezoqobo zakwi-intanethi.
Chwetheza amagama aphambili kwibha yokukhangela, ividiyo yeVimeo enxulumene nayo iya kubonisa. Gcina ividiyo oyithandayo kwiVimeo ukuze isetyenziswe ngaphandle kweintanethi ngezixhobo ezilula.
Kukhuselekile ngokupheleleyo kwaye kusimahla ukusebenzisa
Awuyi kucelwa ukuba ubhatale imali, Sayina okanye ufake inkqubo eyongezelelweyo. Akukho popup, akukho ntsholongwane, indawo icocekile ngokupheleleyo.
I-Vimeo Downloader isebenza kakuhle kwiGoogle Chrome, Firefox, IE, Opera, Safari, Microsoft Edge, UC Browser kunye nakuphi na ukukhangela iwebhu. Ukongeza, iyahambelana kakhulu nenkqubo yokusebenza kweMac.
Indlela yokukhuphela iividiyo zeVimeo
I-Vimeo yindawo yokubamba ividiyo eyaziwayo kwihlabathi lonke, eyilelwe abantu bokuyila. Abantu banokulayisha, babelane kwaye bajonge iividiyo. Ngoku, kulula ngakumbi ukukhuphela iividiyo kwiVimeo kwaye ukhethe i-HD oyithandayo kunye nomgangatho we-SD onokulanda nge vimeo! Ungasindisa ividiyo yeVimeo kwi-mp4 okanye kwifomathi yefayile ye-mp3. Landela nje eli nyathelo lingezantsi uze wenze ingqokelela yakho ngaphandle kweintanethi.
Ngenisa i-URL yeVimeo yevidiyo kwaye ucofe iqhosha Lokukhuphela.
Abantu abangaphezu kwesigidi ezingama-70 bakhetha ukulayisha iividiyo zentsingiselo ephezulu kwiVimeo ukuze babelane nomhlaba. Ukuba ungumlandeli omkhulu weVimeo, uVimeo Vidiyo yokukhuphela ividiyo inokuba sisigqibo sakho sokukhuphela iifilimu kunye neemovie zayo kwi-Intanethi. Oku kukhuphelisa okumangalisayo kukuvumela ukugcina nayiphi na ividiyo kwiVimeo ukuya kwi-MP4 ekumgangatho ophezulu njenge-720p, 1080p, 2K, 4K. Zonke izigqibo zisekwe ngokupheleleyo kwizinto ozikhethayo. Ngokuqinisekileyo, umgangatho ophezulu ngowona khetho lufanelekileyo. Ngaphezu koko, zonke iinkonzo zokukhuphela le downloader ngama-100% mahala. Masizame!
Fumana imibuzo kunye neempendulo zakho apha-Ungayikhuphela okanye uyigcine njani ividiyo yeVimeo kwikhompyuter yakho?
+ Yintoni iVimeo Vidiyo yokukhuphela?
IVimeo yeVidiyo yokukhuphela izixhobo sisixhobo esikwi-intanethi sokukhuphela iividiyo kwiVimeo ngqo kwikhompyuter yakho. Usebenzisa ividiyo download yeVimeo unokukhuphela nayiphi na ividiyo ye-vimeo ekumgangatho ophezulu we-MP4. Umkhupheli wethu ukhupha ikhonkco zevidiyo ze vimeo kwaye emva koko unokukhuphela ividiyo ngokuthe ngqo. Ilula ukuyisebenzisa kwaye isimahla.
+ Ngaba uVimeo Vidiyo wokukhuphela umsebenzi uyasebenza kwiselula?
Isixhobo sethu sisixhobo esisekwe kwiwebhu esingagunyaziswanga nje kwiidesktops. Abantu banokusebenzisa nasiphi na isikhangeli abawuthandayo, nayiphi na inkqubo yokusebenza okanye isixhobo sokufikelela kuyo, kuquka izixhobo eziselfowuni.
+ Ziya phi iividiyo zam emva kokuba zikhutshiwe?
Iividiyo kunye nemovie ekhutshelweyo ngesixhobo sethu ihamba nakweyiphi na ifolda oyibekileyo njenge folda yakho yokukhuphela. Unokuhambisa ifolda nakweyiphi na idrive oyibona ifanelekile.
+ Ngaba isixhobo sigcina ikopi yefayile endiyikhuphelileyo?
I-Vimeo Downloader ayigcini ikopi yokukhuphela kwakho kumaseva ayo.
+ Ndingawugcina nini umxholo wam wokukhuphela?
Nje ukuba ukhuphele umboniso bhanyabhanya okanye isiqendu kwisixhobo sakho, yeyakho ekufuneka uyigcine. Ungayibukela amaxesha ngamaxesha njengoko ufuna ngaphandle kokuphazamiseka kwintengiso okanye ukungasebenzi. Akukho mda kwinani lamaxesha onokuyibukela.
+ Ngaba kuya kubakho i-adware kwifayile ekhutshiweyo?
Qiniseka ukuba akuyi kubakho i-adware okanye i-malware kwifayile ekhutshiweyo. Iiseva zethu zikhuselekile, kwaye sidlula kwikhonkco elikhuselekileyo kubasebenzisi bethu.
+ Ngaba ndingabelana nabanye ngemuvi?
Ewe, le yenye yezona zinto zibalulekileyo malunga noMkhupheli wethu weVimeo ukukhuphela ividiyo yeVimeo, iividiyo ozikhuphelileyo zinokwabelana ngazo kwezinye izixhobo kunye nabanye abantu.
+ Uyifumana njani iVimeo yeVidiyo kwi-Android okanye i-Iphone, Ipad?
Ukuba usebenzisa ibrawuza, Thepha kwaye ubambe ividiyo, khetha Kopisha (okanye ikopi ephindaphindwe ikopi) kwimenyu ephaya. Okanye ucofe ubambe kwindawo yedilesi yebrawuza, kwimpompo yemenyu Khetha Zonke okanye i icon yayo, emva koko ucofe uKopa okanye i icon yayo.
Ukuba usebenzisa i-vimeo app, jonga kwiqhosha lokwabelana, ulithephe, umGangatho wokwaBelana ngeMigangatho kunye nabafowunelwa, ii-imeyile kunye neendlela zangaphambili ziya kubonisa, fumana ikopi kwiKlipboard yeqhosha kwaye ucofe oko. Emva koko buyela kwisikhangeli kwaye wenze isenzo ukusuka apho ...
+ Uyikhuphela njani iVidiyoo yeVidiyo kwi-Intanethi kwiselula yakho?
⓵ Vula iVimeo
Qalisa isikhombisi sakho esiphathwayo kwaye ungene kwiwebhusayithi esemthethweni yeVimeo okanye uvule isicelo seVimeo kwi-smartphone yakho. Vula ividiyo yeVimeo yokhetho lwakho kwaye ukope idilesi ye-URL ngokufanelekileyo.
⓶ Cola i-URL yeVimeo yevidiyo
Ngoku yiya kwiwebhusayithi yeFBION kwaye unamathisele idilesi kwiVimeo Video Downloader yethu. Ngoku, cofa ukhetho lokukhuphela ukuqala ukukhuphelela.
⓷ Khetha umgangatho wevidiyo
Emva kokuba ukhethe umgangatho wevidiyo kwaye ucofe iqhosha Lokukhuphela, ividiyo ikhutshelwe kwimizuzu embalwa kuxhomekeke kubungakanani befayile oyikhutshelayo.
⓸ Yijonge kamva kwi-Android / iOS yakho
Bamba ividiyo yakho yeVimeo ukusuka kwicandelo lokukhuphela kwifowuni yakho kwaye ukonwabele ividiyo yeVimeo ekhutshiweyo ngaphandle kwesidingo sonxibelelwano lwe-Intanethi.
Uyikhuphele njani ividiyo yeVimeo kwi-iPhone?
Ndiyikhuphela njani ividiyo yeVimeo kwifowuni yam?
+ Kutheni le vidiyo ibonakalayo njengomsindo? Uphi lo mfanekiso?
Qhubeka, ukhuphele! Iseyividiyo! Kodwa iBrowser yakho kwi-Intanethi ayikuboni loo nto, ngenxa yoko imele ividiyo njengomsindo ...
Uyabona, ingxaki kukuba iVimeo ngamanye amaxesha ibonelela ngevidiyo kwifomathi ye-HEVC, uninzi lwezibrawuza (kubandakanywa i-chrome kunye ne-firefox) ezingenakudlala. Ngokwenyani, yiSafari kuphela enokudlala le vidiyo kakuhle.
Ngapha koko, nokuba loo mkhangeli awukwazi ukudlala le fayile njengevidiyo, ividiyo yakho yesiqhelo njengeVLC okanye i-KMP ayinangxaki yokwenza loo nto. Ifomathi ye-HEVC igcina kancinane kubukhulu bedatha ngaphandle kokulahleka komgangatho, kucingelwa ukuba iyayifumana ifomathi esetyenziswayo njengangoku yefomathi ye-AVC kodwa konke kukwikamva.
Ke okwangoku ndithembele ngoku, ukhuphele ifayile yevidiyo kwaye uzame ukuyidlala kwisixhobo sakho, iya kusebenza kakuhle, uyabona. Ukuba awundikholelwa, faka iSafari, sebenzisa ikhonkco elifanayo le-vimeo, ubone ukuba iSafari iyidlala kakuhle njani ividiyo angenakukwazi ukuyenza ngeChannel okanye iFirefox. Njengombandela, apha kuboniswa ukuba kuphela yiSafari, IE kunye neEdge zinokudlala ifomathi yevidiyo ye-HEVC.
+ Kuthekani ukuba ividiyo ayikhupheli kodwa iqalisa ukusasaza endaweni yoko?
Cofa ekunene kwividiyo kwaye ukhethe Gcina iVidiyo / Ikhonkco njenge; yeselfowuni, Thepha kwaye ubambe ividiyo, khetha Gcina ikhonkco xa imenyu inyuka.
Ukuba ukwenye yezixhobo ze-Apple ezithandekayo njengeMacOS, okanye i-IOS ene-iPhones kunye nee-iPads, kulungile, musa ukusibeka ityala, yi-Apple ethintela nakuphi na ukulandwa kwevidiyo kunye nevidiyo ngabaphequlululi, izama ukuba i-iTunes ibe phakathi embindini. yakho konke. Kwaye ufuna ii -apps ezikhethekileyo okanye iibrawuza ezivumela ukhuphelo lwefayile ngokuchasene neminqweno ye-Apple.
+ Ndingayikhuphela njani ividiyo ye-Vimeo yabucala?
Njengoko ividiyo yabucala yeVimeo isekwe kwi-RTMP protocol, kuphela yiSafari exhasa ukhuphelo lolu hlobo lwevidiyo. Ukuba ufuna ukukhuphela ezinye iividiyo kwiVimeo, ungasebenzisa umncedisi wokukhuphela.
Imibuzo efanayo: Ngaba ndingakwazi ukukopa ividiyo yabucala kwiVimeo?
+ Isebenza njani iVimeo Vidiyo yokukhuphela?
Isebenza ngokufikelela kwikhonkco kusetyenziswa oomatshini bethu esidlangalaleni ngaphandle kwemvume yokungena, kwaye ukuba ividiyo ayifumaneki kuluntu, ayinakho ukukhutshelwa. Njengoko ifumanisa ukuba ividiyo iyafumaneka kwaye iyakhutshelwa, ithatha ezantsi zeziphi iimpawu ezikhoyo ukuze ikhuphe kunye nesibonisa umsebenzisi ukuba ukhethe ukukhetha nasiphi na isigqibo afuna ukusikhuphela.
+ Uyikhuphela njani iividiyo zeVimeo ukuze ubukele ngaphandle kweintanethi?
Ngaba ungayibukela iividiyo zeVimeo ngaphandle kweintanethi?
Ukuba ukhuphele ividiyo ikhona, uya kubona iqhosha phantsi kwenkcazo yevidiyo ethi Khuphela. Cofa le iqhosha lokukhuphela kwaye ividiyo iya kuqala ukukhuphela kwikhompyuter yakho kwaye ukonwabele iividiyo ngaphandle kweintanethi.
+ Ngaba uVimeo ukhululekile?
I-Vimeo inikezela ngeendlela ezine zobulungu: Ukongeza, i-Pro, kunye neShishini, iNkulumbuso. Zombini zinamanqanaba ohlukeneyo okugcina kunye nenkxaso njengoko ubona kwitshathi engezantsi. I-Vimeo inikezela ngokusisiseko, ubulungu basimahla, kodwa kukukhawulela kwisitoreji esiphezulu se-500MB ngeveki.
+ Ndinokuzikhuphelela njani iividiyo kuVimeo?
Khuphela i-URL yevidiyo oyifunayo, kwaye uyincamathisele kwindawo ephezulu. Emva koko ucofe iqhosha Lokukhuphela ngasekunene kuloo bar. Iya kulayisha imizuzwana embalwa, emva koko uya kukhetha ukukhuphela ividiyo kwi-FLV (Flash), MP4, okanye kwifomathi yeWebM.
+ Ndinokuzikhuphelela njani iividiyo zeVimeo mahala?
Ndingazifumanaphi iifilimu zasimahla?
Vula iwebhusayithi ye-FBION, faka i-URL yevidiyo yeVimeo kwaye ucofe iqhosha Lokukhuphela. Uya kubona uluhlu lwazo zonke izixhumanisi ezikhoyo. Khetha ifomathi kunye nomgangatho, kwaye ukonwabele iividiyo ngaphandle kweintanethi!
+ Ngaba unokukhuphela iVimeo kwimfuno?
Ngelixa ungakwazi ukukhuphela iividiyo zeVimeo ezifumanekayo ukuba zithengiwe okanye ziqeshisiwe kwicandelo le-On Demand yesiza, unokuzikhuphela iividiyo ezisimahla ukubukela. Awunayo i-akhawunti ukuze ubukele iividiyo, nangona kunjalo, ukuba une-akhawunti yeAustralia okanye ye-Pro Vimeo uya kukwazi ukukhuphela iifayile zomthombo xa zikhona.
+ Ndiyenza njani ukuba ndikhuphele iVimeo?
Ngapha koko, iPro, iShishini, kunye namalungu ePrimiyamu banokukhetha ukwenza iividiyo zabo ukuze bakhuphele. Ukuba unamalungu asisiseko kwaye uphucule iakhawunti yakho, ukhetho lokukhuphela ukukhutshwa luya kuvulwa ngokuzenzekelayo.
Ubukho beevidiyo zokukhuphela luxhomekeke kwibala lokubhalisela umenzi wevidiyo. Amalungu asisiseko awanakho ukwenza ukuba iividiyo zawo zikhuphele; Nangona kunjalo, ukuba ividiyo yeyokuDibanisa, iPro, okanye ilungu leShishini, banokukhetha ukwenza ukhetho lokukhuphela.
+ Ixabisa malini iVimeo?
Ubulungu beVimeo Plus, obugubungela isitoreji kancinci ukusuka kwiSiseko, buya kubiza abasebenzisi i- $ 7 / inyanga, engoyisi enkulu kwi-wallet yakho. Nangona kunjalo, ubulungu bePR bupakishe udonga, nokuba luninzi kakhulu ugcino kunye nokudlala okugcwele kwe-HD, kwi- $ 20 / ngenyanga ukuya kuthi ga kwi-1TB / ngonyaka okanye kwi- $ 34 / inyanga ukuya kuthi ga kwi-3TB.
+ Yimalini iVimeo kwimfuno?
Joyina i-Vimeo Pro malunga needola ezingama-20 kuphela / ngenyanga ehlawuliswayo ngonyaka ukuqala ukuthengisa. Yizame ngaphandle komngcipheko kwiintsuku ezingama-30. Thatha ekhaya 90% yengeniso emva kweendleko zokuthenga. Khetha irente, uthenge, okanye ubhalisele, kwaye usete elakho ixabiso.
+ Ungayikhetha njani ividiyo yokukhuphela iVimeo yeMac?
+ Uzigcina njani iividiyo zeVimeo kwigalari yakho?
Emva kokuba ividiyo ikhutshiwe, tsala ifayile yevidiyo kwikhompyuter yokukhuphela kwikhompyuter yakho kwi-iTunes okanye esinye isixhobo esifana ne-Android okanye i-iPhone. Ngoku ividiyo yeVimeo iya kusindiswa kwigalari yakho ephathekayo.
Eyona nkonzo ilungileyo kwi-intanethi yokukhuphela ividiyo kwiVimeo yasimahla.
7 I-Rated abasebenzisi
Ngesi sixhobo, izixhobo ezingapheliyo zevidiyo yeVimeo isondele. Konke okufuneka ukwenze kukukhuphela idilesi yevidiyo yeVimeo, uyibeka kwindawo ekhethiweyo kwaye ucofe uKhuphelo. Kuphela mzuzwana, umkhupheli weVimeo uya kuyiphawula ngokuzenzekelayo loo vidiyo kwaye avelise amakhonkco akho okukhuphela. Uyabona, kulula kakhulu ukukhuphela ividiyo yeVimeo.
Indawo indinika isisombululo esifanelekileyo sokukhuphela iividiyo kwiVimeo kwi-intanethi. Ngenisa nje i-URL yevidiyo kwaye ucofe uKhuphelo. Emva koko, yonke into ihamba kakuhle. Iyamangalisa.
Umcebisi wezeMali, Fort Walton Beach
Le yeyona Vileo Downloader intle endakha ndayisebenzisa. Ngaphandle komda, ndiyakwazi ukugcina zonke iividiyo zam endizithandayo kwikhompyuter. Enkosi ngomsebenzi wakho omkhulu!
Ingcali yeNkxaso yeKhompyutha, Old Saybrook
Ukukhuphela iividiyo akukaze kube lula njengoko ngaphandle kokubhalisa naphi na apho unokufumana ividiyo yeVimeo. Ndiyamangaliswa kuba ividiyo endiyithandayo ikhutshelwa kwinxalenye nje yemizuzu.
Umgcini wedatha, Charlotte
Kutshanje ndikhuphele ividiyo enkulu yeVimeo kwaye ikhutshelwa ngaphandle kwemizuzu embalwa. Ndothuke ngokwenene ngesantya sayo esimangalisayo. Le yeVimeo efanelekileyo yokukhuphela iVidiyo.
UMphuhlisi weSoftware, Chattanooga
Ukulanda ividiyo yeVimeo sisixhobo esihle kwaye senza oko sikuthembisayo. Esi sisixhobo esifanelekileyo sokukhuphela iividiyo zeVimeo. Ndifuna ukucebisa esi sixhobo kuwo wonke umntu!
Ndichukumiseke kakhulu yiVimeo Video Downloader. Ngapha koko, kuyilo olupheleleyo kwaye kubhetele kunabanye bokukhuphela abakwi-intanethi.
Ingcali yenethiwekhi, Greenland
Ngokuqinisekileyo oku kuhle! Akukho zidingo zokukhuphela. Kopa ngokulula kwaye uncamathisele i-URL kwaye uya kufumana iividiyo zeVimeo okwethutyana. Kwaye ezinye iisayithi zevidiyo ezithandwayo zixhaswe kakuhle. Amava am amnandi kum kwaye akukho zingxaki kwakhona!
Ingcali yezibalo, Paris
Imveliso yasimahla! Kufanele ukuba ibe yinto yabantu abathanda ukubukela iividiyo ezi-intanethi ngaphandle kwe-intanethi ekuhambeni okanye ukubukela nje kamva. Kulula ukuyisebenzisa, ikhuselekile kwaye yenziwe kakuhle ekukhupheleni iividiyo!
Khuphela iividiyo zeVimeo kwi-MP4 ekumgangatho ophezulu 2022